video ka ipad wareejiyo iPad, filim ka ipad wareejiyo iPad, video ka ipad soo dir iPad, TR d
> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Video ka iPad in iPad
Ugu dambeyntii, waxaad ka heli brand cusub iPad, sida iPad mini 2, laakiin waxa hayayaasha maskaxda waa sida loo video ka jir iPad wareejiyo leh? Hayso badan oo videos on your iPad oo aad rabto inaad la wadaagto user kale iPad? , Waxaad Tan iyo video aad u ballaaran oo aan u soo diri kartaa email. Ka sokow, ma ahan fikrad fiican in aad u hagaagsan iPad in Lugood, ka dib oo dhan Lugood saari doonaa oo dhan videos hadda jira ka hor inta syncing. Xaaladdan oo kale ah, waxa aad samayn karto si aad video ka iPad wareejiyo iPad?
Halkan, waxaan ku talinaynaa in dhinac sadexaad u iPad barnaamijka video kala iibsiga iPad, ee Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Iyada oo barnaamijkan, aad iPad video clips iyo filim lagu soo guuriyeen doonaa in kale iPad la click hal. The video iyo filimada kale ee iPad ah weligiis la dhaqaajin maayo. Hoos waxaa ku tutorial ah tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo filim ka iPad wareejiyo iPad. Download barnaamijka kombiyuutarka iyo hubi tutorial soo socda.
Tutorial hoose ayaa waxaa la isticmaalayo version Windows ah. Users Mac sidoo kale waxa ay raaci karaan.
Tutorial ku saabsan sida loo nuqul ka iPad video in iPad
Waxyaabaha aad u baahan tahay: 2 iPads socda macruufka 9/8/7/6/5, kombiyuutarka, 2 USB fiilooyinka Apple, Wondershare MobileTrans.
Tallaabada 1. Daahfurka barnaamijka iPad in iPad video kala iibsiga
Burcad Wondershare MobileTrans ah, hal-riix iPad barnaamijka video kala iibsiga iPad, kombiyuutarka. Markaas, furmo suuqa hoose baxa. Tag Phone in ay hab Transfer Phone.
Tallaabada 2. Isticmaal Apple USB fiilooyinka in ay ku xidhmaan laba iPads
Bareesada in USB Apple ah fiilooyinka in ay ku xidhmaan laba iPads in kombiyuutarka. Laba iPads dhowaan la ogaan doonaa ka dibna soo bandhigay suuqa kala iibsiga iPad.
By default, files ku taageeray wareejinta waa la saxay. Sidaas darteed, waa in aad uncheck faylasha kale oo sii Videos kaliya hubiyaa.
Tallaabada 3. video ka iPad dir iPad
Hadda, riix Start Copy . Marka wada hadal pop-up ka muuqataa, waxaad eegi kartaa boqolkiiba bar horumarka. Marka gudbinta dhammaado, videos waxaa loo diri doonaa in kale iPad.
Marka laga reebo video wareejinta ka iPad in iPad, Wondershare ayaa sidoo kale ku siinaysaa fursad ah in aad ka iPad wareejiyo music si ay iPad iyo sawiro ka mid iPad dhaqaaqo iPad aad.
Dhab ahaantii, ka sokow Wondershare MobileTrans ah, Wondershare ayaa sii daayay barnaamij kale la isticmaalo si sahlan loo magacaabay TunesGo Wondershare Retro kaas oo sidoo kale kaa caawin karaan si ay u gudbiyaan video in iPad ka iPad. Go Wondershare Gurtida waa ka Saaxiibkiis Lugood ah ka badan barnaamij video kala iibsiga iPad in iPad. Sidaa daraadeed, waxa aad maamuli kartaa music, videos, sawiro, xiriirada iyo iMessages on your iPad fudayd.
1 Click si ay u gudbiyaan Xiriirada ka macruufka in Android 4.4, KitKat
Top 4 Siyaabaha Bedelka Photos ka iPad in Flash Drive
Sida loo hagaagsan Movies in iPad